Vaongorori vatofunga nezve 3.5mm jack yevakafa pane iyo iPhone 7 | IPhone nhau
Vaongorori vatofunga nezve 3.5mm jack yevakafa pane iyo iPhone 7
Kune akawanda, kwete, mazhinji makuhwa ari kutenderedza mukana wekuti Apple inobvisa 3.5mm jack yekubatanidza muiyo iPhone 7. Izvo zvikonzero zvikuru zviri chete nekuda kwechinangwa chekuita kuti mudziyo uve mutete uye kureruka, Apple yakanangana nekugadzira iyo iPhone seyakaonda sezvinobvira mune yega yega edition, zvisinei hachisi chinhu icho vashandisi vari kuda kana, vachiregeredza kuwedzerwa kwemabhatiri uye mamwe marudzi ekuvandudza kweahardware ayo ari iwo chaiwo makuru ehunyanzvi maficha ayo vashandisi vanotsvaga mudziyo. Vaongorori vari kutanga kufanotaura kupera kweiyo 3.5mm jack.
Nekudaro, nguva dzose zvinoenderana nevanoongorora, hazvizove kusvika gore ra2017 apo Apple inosarudza kuisa tekinoroji yekudzimisa ruzha mumusoro wayo nema Lightning kubatana, panguva iyi muna2016 ichangotarisa pakuwedzeredzwa kwetambo yeMheni senge yekupinda uye nzira yekubuditsa. ye iPhone zvishandiso, Izvi ndizvo zvinofungidzirwa nevaongorori Blayne Curtis naCristopher Hemmelgarn.
Isu tinofunga pane mukana wekuti Apple ichasanganisira tekinoroji yekudzima ruzha, asi kwete gore rino, gore rino rinongosvika mahedhifoni aine Lightinig kubatana, asi pasina tekinoroji yekudzima inzwi. Uku kufungidzira kuchangobva kuitika ndiwo marongero ezuva.
Tinogona kupedzisa kuti vaongorori vakafanotaura kuti 3.5mm jack chinongedzo hachizove chiripo mune inotevera iPhone modhi, zvisinei, iyo yekumisa kurira tekinoroji haigone kusvika iyo inotevera edition, ndokuti, chimiro chakachengeterwa iyo iPhone. . Pakupedzisira Apple yakanyura mukugadzira chishandiso chakaonda sezvinobvira pamutengo wekumisa kubatana uku. Pasina mubvunzo, chiyero ichi chiri kuzounza kupokana kwakawanda, kunyanya pazuva rekuvhurwa kwayo apo mahedhifoni evashandisi vazhinji akaremara. Kunyange zvakadaro, Apple inoronga kuisa maadapter mubhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Vaongorori vatofunga nezve 3.5mm jack yevakafa pane iyo iPhone 7
Ini ndinofunga kuti chii chichaunza kukakavara nemabatiro avanogadzira iyo iPhone 7 pamwe neprimiyamu, ndiko kuti, ine zvirinani mbiri kamera kamera nezvimwe, kupfuudza iyo optical stabilizer yeye plus asi zvirinani zvirinani zvine mutsauko we4,7 ipapo Apple yaizondinyadzisa zvakawanda, sei ndaizonzwa kusarurwa nei kana ndichida 4,7 inches asiwo kuva neyekupedzisira nei vachizondisiya kunze kana ini ndisingade 5,5 saizi asi kana ini ndichida iyo yekupedzisira, izvo zvinogona kunge zvichitove rusarura.
Jaranor rusarura, uri kurevesa here? Nekuti iwe unofunga kuti ipad pro iri nani kupfuura mhepo, uye izvi zviri nani pane mini, iyo yekuwedzera inofanira kunge iri nani kupfuura iyo 4,7, sezvo izvi zviri nani kupfuura 4 ″.
Inyaya yeSIZE, murume, havagone kuisa imwe yekuwedzera kamera kwavangaise kana pasina gomba ??? nekuti iwe unofunga kuti vanoda kubvisa headphone jack, nekuti iwe unofunga kuti ivo vanoda kubvisa iyo sim tireyi neiyo dijit sim sezvavakaita pane ipads.
Ini ndinofunga ivo vari kuyedza kukuru kuisa kwakawanda uye kwakawanda tekinoroji muiyo iPhone, uko kunodhura zvishoma kuisa yakawanda tekinoroji? Zvakanaka, pamusoro pezvo, idhirowa uye zvine musoro, zvinondinetsawo nekuti ndiri 4,7 ″, asi funga nezvechinhu chimwe, iyo 7 one iphone 4,7 ichave iri nani kupfuura iyo 6 ″ 4,7s.
Makakatanwa ichave nzira iyo ivo yavanoda kutitengesa nayo 4,7 ″ iphone uye chengetedza mamwe mahedhifoni, zvichitimanikidza kutenga zvimwe zvakasiyana, izvozvi ivo vanotitengesera iphone mumachunks, izvo zvingave zvinonyadzisa pamutengo wemidziyo iyi, uye Ndinovimba kuti Apple haitore nzira yekuwana mari kubva kwatiri kwese kwese kuti vakwanise kuita mabasa akakosha sekuteerera kumimhanzi, kana vakatiisira mahedhifoni mumamiriro, vangazowana mari yakawanda nekutengesa kwe iPhone pane kana ivo havadaro uye vane chinangwa chekutora mari kubva kwatiri nemahedhifoni akapatsanurwa, kana vakaisa imwe bluetooth, iyo yaigona izvo zvino "kuzvibata zvakanaka" ingadai iri ostia, zvakare, vakatotaura kuti tambo dzaizonyangarika, nekuti ivo vanosundira iyo bluetooth p * kune zvazvinofanira kuva uye usatiudze isu mabhuru pamusoro pamahedhifoni ane mheni.
Ndiudze apo iyo iPad Air 3 ichave iri nani pane iyo pro ine mashoma saizi uye nemwedzi mishoma yakaparadzana. Izvo hazvina musoro, iyo iPhone inofanirwa kuve iine maficha akafanana uye ingochinja saizi kuti ikwane kuravira kwako.
ndangoona pfungwa nyowani ye iphone 7, https://www.youtube.com/watch?v=ZdJ7zga2yGg , Zvinoshamisa, ndinofunga ndipo panoenda pfuti, handizive kana iwe uchinzwa zvakafanana neni nekuti ndinoziva magadzirirwo eiyo iPhone 7 ichave iri, kiyi ichave iri micheto, uye izvo zvinhu ivo shandisa, ini ndinovimba micheto senge vhidhiyo, musanganiswa pakati pekugadzirwa kweiyo 6 uye iyo 5, uye izvo zvaipesana.
Ini handifunge kuti pfungwa iyi yakafanana, amoled skrini haizounze iyo 7, induction kuchaja chero nekuti Apple haifarire induction uye chikonzero chine induction yemabhurashi emazino uye kicheni Apple ichaita chaiko isina waya kuchaja kunyangwe ini ndichitya izvo kuva muma7, uye iyo touchid ini ndinofunga kuti mu7 ichabviswa uye ichave iri pasi pechidzitiro, saka ichave iri yakanaka dhizaini Kana zvakare ichave iine mitsara kuseri kweiyo antenna nekuti ivo vanoshandisa chinhu chisingazodi kuisa mitsara.
Ini handinzwisise kuti vanhu vanochemera sei ligthing mahedhifoni, isu tinofanirwa kuenderera mberi uye kuti Jack anga aripo kweanopfuura makore zana uye anotora yakawanda uye inguva yekuzvibvisa uye nekudaro ive nenzvimbo yakawanda yemadhiramu, maspika nezvimwe. nezvimwewo, adapta uye ndizvozvo zvinoda mari yakawanda uyezve mahedhifoni matsva atinotenga anova ligthing uyezve makwikwi anozovatevera uye pakupedzisira vanozoabvisa kubva kunhare dzese. Ini handinzwisise kuchema zvakanyanya, nemutemo mumwechete we100 gore rega rega zvivharo zvangu, dzimba, uye kunyange madoko e iPhone kana zvitsigiro zvinosiiwa zvisina basa uye kana ndikaburitsa dhizaini nyowani zvese izvo zvisina kukosha kwandiri uye ndinofanira ndakazvimonera uye ndotengazve zvifukidzo, kesi dzeiyo nyowani iPhone. Izvi zvakadaro asi kuchema hazvisi, kuchema zvingave kuti iyo iPhone 3 yanga isina kamera mbiri uye iyo yekuwedzera kana nei izvozvo zvisina tariro hakuna adapta kana iwe wotenga iyo yekuwedzera kana iwe uchisara neyakaipisisa Hardware uye kana iwe usingade iyo yekuwedzera nekuti saka hongu iko kusonwa. Asi iyo ligthing mahedhifoni murume hapana chinoitika adapta uye ndizvozvo asi nekuda kweizvozvo isu tichava nematauri ari nani, yakawanda nzvimbo yemadhiramu etc. Uye hapana mutengo weadaptha iyo inokushandira iwe nekusingaperi. Ini handinzwisise vanogunun'una asi tora pfungwa yekuti hauzomboona 4,7 odhiyo jack pane chero iPhone uye uku ndiko kushanduka. Kana kune vazhinji venyu zvaive zvichiri isu taizoenderera nekutsva panzvimbo ye hdmi nekuti zvirokwazvo zvese zvishandiso zvataive nazvo taizofanira kuisa scart kune hdmi adapter uye izvo hazvina kutonhorera, handiti? iwe unotofanira kutenga adapta haha ​​uku ndiko kushanduka, uye kugamuchirwa.
Vanhu vanochema here? Nei iwe uri iye zvino asiri kuzobhadharira bluetooh uye / kana ngowani dzemheni zvakanyatsofanana nezvatinazvo, handizvo? Wobva wavhara iyo clown peak
Nekusaremekedza inotaura zvese nezvako, iwe uchifema kuchema udza amai kuti vatenge iwe ligthing adapter uye ichave yakakodzera zvese, kuchema kuti iwe uri kuchema juasssss juasssss kuchema kune Samsung Hahahaha uye rega tekinoroji ifambire mberi. LLORICAAAAAAA KUCHEMA NAMAI
Iwo mahedhifoni anouya akafanana asi aine ligthing kubatana, uye seyeBluetooth sarudzo yekutenga zvakasiyana.
Ndiri kureva, kunze kwekunge waita chiseko, iwe uri murombo munhu asina kana sendi, jira rakadii ... hahaha, huya undiudze zvimwe clown, crybaby uye chii chimwe?
Tarisa uone iyo HFC m8 iine chete 5 ″ zvishoma pa4,7 ine kamera yakapetwa, zvakafanana neapo Apple yakati havaikwanisa kudzora mafuremu uye makwikwi ane maforamu madiki madiki. Ini ndinofunga kuti kana uchigona kuva nekaviri kamera muna 4,7 asi chokwadi chaizondipusha kuti sei ndichida iyo iPhone ye4,7 uye ine yakanakisa kamera ini yandinogona, asi mune chero mamiriro ezvinhu ini ndichaodzwa mwoyo.
Wataura chokwadi, isu tiri muhondo imwe chete, ngatitarisirei kuti Apple ichaita, asi tarisa pane izvo vibrator nyowani inobata, ivo vakafanirwa kupira kunyange bhatiri, sezvo vasinga shandure mabhatiri neiri bhatiri rekuvandudza Handizive kuti vanozowana kupi nzvimbo yekaviri kamera, asi zvese zvinogoneka uye zvimwe patinotaura nezve Apple.
Kana vakaisa mbiri kamera kune iyo yekuwedzera, iyo yavakamuisira ye4,7 ″? Iyo iPhone 6s kamera? Chokwadi ndechekuti zvese zvinoramba zvichionekwa, pamwe vari kuzvigadzirira iyo iPhone 7s, kana kuti zvimwe dhizaini nyowani yeiyo iPhone 7 inobvumira iyi kamera kuverengerwa, isu tine ruzivo rudiki zvekuti mukana wekuti ivo vanoisa chimwe chinhu kana kwete yakafanana xD.
Kutendeseka, kana vakabvisa iyo 3.5mm jack, ivo vanozounza foni uko zuva risingavheneke pavari. Ruregerero kutaura asi ini ndaneta chaizvo neApple uye chishuwo chayo kumanikidza vashandisi kushandisa yakawanda pazvimwe zvekuwedzera nekuda kwekuchiva kwavo kuti pakupedzisira ndinobheja chero chavanofarira chiri chemari. Zvishandiso zvakapetwa = zvishandiso zvishoma = kudhura mari = vanobhadharisa zvakafanana kana zvimwe zvekushandisa pakuve "vatete" uye vanobva vangova marara. IOS 9 yave iri iOS yakaipisisa (iPhone yangu yakandiita marara), uye ikozvino varikuda kundimanikidza kuti nditenge chero maBlue bluetooth mahedhifoni kana 3.5mm mheni adapta ??? Zvakanaka, pandinofanira kubvisa iyo iPhone 6 ini ndinosarudza kuenda kuAndroid nematambudziko ese ainayo, pakupedzisira, Apple uye yayo nyowani iOS havasi kure neiyo Android uye zviputi zvayo.
Alfonso R. akadaro
"Zvikonzero zvikuru zvakakonzerwa chete nechinangwa chekuita kuti chishandiso chiwedzere uye chireruke," ndinokambaira ndiri mupenyu, ha ha ha ha. Zvikonzero zvikuru hazvipfuure imwechete, MARI, hapana chimwezve. Kana Mwari akabvunza Apple chishoma uye chakareruka chishandiso, kana Mwari.
Sekupinda kunoti vashandisi ko kana tikabvunza uyezve kushevedzera kuri kuzvitonga kuzhinji uye izvo izvo Apple zvinotipa chishandiso chinoremadza mazana ezviuru emahedhifoni aripo pakurohwa. Kuti kana, sekureva kwemupepeti anoti (ndine hurombo kuti ndinopokana nazvo zvakanyanya), Apple ichave nemutsa zvakakwana kuisa adapta mubhokisi. Asi chii icho gehena, uye urombo, adapter, ini, kana ini handifunge chero munhu, anoda kuvimba neadapta ine ropa kuti akwanise kushandisa maheti aanoda chaizvo, kubva kuBose inopfuura € 300, kune avo ve Chinese checents cheEuro.
Izvi, ndinozvidzokorora kamwe zvakare, hachisi chinhu kunze kwekunyepedzera kumeso kwedu kweropa, vanotipa mudziyo wakanaka kwazvo uyo asina akambokumbirwa uye nekudzoka vanotora chinongedzo chepasirese chakambovapo, vachichinjira icho yakasarudzika uye inobata, ndiko kuti, kudonhedza nekudonhedza pasita yemahwanda avo. Ziso! Ngatisakanganwe nekuti hazvisi zvidiki kuti Apple ichangotenga kambani inonyanya uye yakatsaurirwa kuita mahedhifoni; kana duster rikaonekwa zviuru zvemamaira kure. Uye kana isu tichida kuteerera kumimhanzi uye kubhadharisa iyo iPhone panguva imwe chete, chii chatinoita? Ah chokwadi, tenga imwe adapta iyo ichave iri mhando yemakororo ekupamba uye unomhanya.
Bluetooth mahedhifoni, asi hauoni here kuti vanokuseka kumeso kwako? Parizvino unogona kushandisa helmeti dzeBluetooth, kutaura chokwadi unogona kuzvishandisa kwemakore akati wandei. Chikonzero cheBluetooth chakasekesa zvekuti zvakatokosha kuona chirevo nezvazvo.
Ndiri kutarisira kuuya kweGalaxy S7, iyo, kunyangwe ichindipa zvinorwadza zvakadii, ichave yangu inotevera smartphone mushure meiyo iPhone 4, 5 uye 6, ini ndichasiya Apple nekuti zvinonyadzisa chaiko. Vaya venyu vanoramba vachizadza homwe dzevanyengeri ava vanokusekai kumeso zvirokwazvo vane izvo zvamunofanirwa nazvo.
Pindura kuna Alfonso R.
Ndine iPhone 6S uye ini shit pane yako gwara S chero chii .. Uye izvo hazvisati zvabuda. Uri kuneta nei? Nditsanangurire, ndakatenga nhare uye hapana munhu anondimanikidza kutenga chero zvishongedzo kana chero chinhu chinoshamisa, hachina kana kufukidza saka usataure zvisina maturo, tenga gwara uye wozondiudza
Alfonso, ndinofunga zvakanyanya senge iwe, kana jack ikasimbiswa, ma6 angave ari angu ekupedzisira iPhone, ndichiinzwa zvakanyanya, kumba ndine Apple yese nekuda kweiyo ecosystem iyo inosanganisira, zvese zvinowirirana, zvese zvakarairwa, sezvo ini sezvazviri.
Asi ngatiregei kutya, ngatimirirei kuti ibude, chinoenda chivimbo uye ivo vanofunga zvakare
Zvese zvikonzero Rafael nhanho dzinofanirwa kuve dzemberi uye ndomaitiro ekushanduka kuri.
Munda wemizambiringa akadaro
Pamwero uyu rimwe zuva hauchakwanise kusvina ruoko rwako zvakanyanya kana uine iyo iPhone nekuti unozvicheka ...
Uye ini ndinosiya iyo iPhone 7
Pindura kuna csrltd
Ndinodikitira kuti vabvise iyo 3,5 asi nekuda kwerudo rwaMwari ... Kuti vabvise ligthing voisa iyo USB mhando C kana rinotevera gore kumashure kune zvakafanana! Zvekare kukanda zvese kana kudzoka kuma adapta matsva! Zvandinoda kuti iPhone iite kana zvirinani kuwedzeredza zvinhu zviviri ... Multiple Windows uye chimwe chinhu chakafanana necontinium ye lumia 950xl ndinogona kubatanidza mbeva kuti ndikwanise kushandisa iyo iPhone sekuraira kwaMwari pachiratidziri ... . Izvo zvakaitwa naWindows zvinoshamisa, zvinorwadza kuti ivo chete vagadziri havasi ivo vanofarira chikuva icho…. Ndanga ndiripo kubvira pakabuda iyo iPhone yekutanga neIOS uye kana ndisina kushandukira kuWindows gore rino ingori nekuda kweiyo ecosystem ... Asi sevanogadzira vanoshandisa von windows uye Apple haigadzire iOS munzira iyoyo, iyo 6s plus inogona kunge iri yangu yekupedzisira iPhone!
Maitiro ekuwedzera iyo isina kuverengwa dhairekitori muMail
Apple inogadzirira yavo yekutanga terevhizheni nhepfenyuro